Archive du 20180125
TIKO-AAA Andranomanelatra Hopotehina hatramin’ny farany
Mazava ankehitriny fa ny hamotehana hatramin’ny farany ny Orinasa Tiko-AAA Andranomanelatra no ataon’ny fitondrana HVM amin’izao fotoana. Tsy nisy nidiran’ny fitakiana momba ireo antontan-taratasy notakiana taminy intsony ny baiko azon’ny mpitondra ao Vakinankaratra, eo ambany fitarihan’ny Prefen’Antsirabe fa dia ny fanakatonana tanteraka ity orinasa ity ary ny tsy hisian’ny vokatra Tiko eny amin’ny tsena intsony no antony.
Fitondrana HVM Afabaraka tanteraka eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena
Tsy maharototra ny mpanara-baovao loatra intsony ny fanazavana nomen’ny minisitry ny fitsarana, Rasolo Elise Alexandrine, mikasika ny valin-teniny ny alahady teo momba ny fiampangan’ilay teratany frantsay nandositra ho nanao kolikolina 70.000 Euros taminy.
Mpitandro ny filaminana Malagasy Terena hamotika an-dRavalomanana
Ataon-dRajaonarimampianina sy ny HVM fitaovana hamotehana an’i Marc Ravalomanana ny mpitandro ny filaminana. Na aiza na aiza alehan’ity farany, misy hatrany ny gafy sy ny antsojay ary tena niha mafy mihitsy tamin’ity herinandro ity. Nopotehina hatramin’ny fitaovana fanamafisam-peo tao Tolagnaro ny alatsinainy teo.
Kolikoly avo lenta ao amin’ny fitsarana Miantso ny CSM hanadihady ny SMM
Tsy mbola milamina ny raharaha Houcine Arfa sy ny ampamoaka isan-karazany nataony. Tsy misy afaka ny hitompo teny fantatra aloha hoe marina ny nambarany sa diso ? Torak’izany koa ny nolazain’ireo manampahefana Malagasy voatonontonona, ka ny fanadihadiana lalina ihany no hamaritra ny tena marina.
Lanto Rabenatoandro Ara-dalàna tsara ny dosien’ny AAA
Mihamafy ny antsojay atao amin’ny orinasa AAA, ka nisy ny fakam-baovao misimisy kokoa natao tamin’ny Tale Jeneraliny Lanto Rabenatoandro omaly maraina teny amin’ny Magro Behoririka. Na ny Magro ao Behoririka na eny Tanjombato, dia mahazo fandrahonana fa hakatona avokoa. Ny alin’ny talata teo mantsy dia nidiran’ny miaramila tao Andranomanelatra Antsirabe.
Herim-pamotehana an’i Gasikara
Hery vaovao ho an’i Madagasikara ! Io no teny faneva nentin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina nirotsaka hofidiana filoham-pirenena tany amin’ny taona 2013. Feno 4 taona katroka anio ny nitondrany an’i Madagasikara, ka ny rehetra no afaka hamaly hoe: hery vaovao tokoa sa herim-pamotehana an’i Madagasikara?
Hery Vaovao ho an’i Madagasikara Nitondra krizy vaovao ho an’ny Toekarena
Efa-taona sahady no nanaovan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fianianany amin’ny maha mpitondra azy (25 janoary 2014- 25 janoary 2018). Raha atao ny jery todika ny amin’ny zava-bita teto amin’ny firenena, indrindra ny lafiny ara-toekarena dia hita soritra tamin’ny lafiny maro ny tsy fahombiazan’ny fitondrana tarihiny.
Fanesorana mpikamban’ny SECES “Tsy manan-kery ny latsa-bato miafina”
Manoloana ny vaovao mikasika ny raharahan-tokantranon’ny sendikan’ny mpampianatra-mpikaroka sy ny mpikaroka-mpampianatra na SECES, nivoaka tamin’ny haino aman-jery ny 12 janoary 2018 sy mba tsy hisian’ny savorovoron-kevitra ao amin’ireo mpikambana ny SECES rehetra manerana ny Nosy, dia mitondra fanazavana ny birao nasionalin’ny SECES ahitana an’Atoa isany Ralambomanana Dimby, Randrianasolo Rivoarison ary Randrianomanana Bruno
Fanomezana ho an`ny traboina Mbola azo atokisana ve ny BNGRC ?
Nirarakopana ny fanampiana ho an`i Madagasikara rehefa miditra amin`ny taom-pahavaratra dia matetika misy ny loza voajanahary hitranga amin`ny vahoaka. Ohatra tamin`ny fandalovan`ny AVA, maro ireo vondrona na fikambanana eto an-toerana na iraisam- pirenena nanome fanampiana natolotra ny BNGRC na biraom-pirenena misahana ny loza voajanahary izay rafitra hitantana ny fitsinjarana amin`ny traboina.